War Hada Dhageyso: Amisom oo Shabeelada Hoose ku Xasuuqday Qoys Hal Guri ku wada Nool Kadib markii ay….. – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 5th October 2016 046
Inta la xaqiijiyay 6 qof oo isgu qoys ah ayaa ku dhimatay ka dib markii ciidanka AMISOM ay hoobiye ku tuureen Tuulada Faranga oo u dhow deegaanka Jannaale ee degmada Shalaanbood ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Dadka dhintay ayaa la sheegaya in ay ku jiraan caruur iyo haween Hal qoys ka wada tirsanaay.
Guddoomiyaha Degaanka Shalaanbood Nuur Cismaan Raage oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Madfaca ay rideen Ciidamada AMISOM islamarkaana uu ku Habsaday Qoyska ka Koobnaa 8 Ruux oo Lix kamid ah ay Goobta ku dhinteen,halka Labada kale uu Dhaawac Halis ah soo gaaray.
Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay dhowr jeer Madaafiic Ciidanka AMISOM uga soo tuureen goobta uu ku dhacay Hoobiyaha ay tuureen ciidanka AMISOM.
TOOS U Daawo: Xujeyda Muslimiinta oo Hada taagan Banka Carafo
Dhaq dhaqaaqa al-shabaab oo la sheegay in Cadaadis lagu haayo.
Sakariye Sakariye 26th January 2018
Dhageyso: Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ka Hadlay Xasuuqii Gaalkacyo iyo Sarakisha la dilay.